न्युज २४ टेलिभिजनका पत्रकार रवि लामिछानेले छाडे न्युज २४ ! | सुदुरपश्चिम खबर
न्युज २४ टेलिभिजनका पत्रकार रवि लामिछानेले छाडे न्युज २४ !
काठमाडौं, चर्चित कार्यक्रम सिधा कुरा जनता संगका प्रस्तोता रवि लामिछानेले न्युज २४ टेलिभिजन छाडेका छन् । उनी टेलिभिजनको कार्यक्रम विभागमा प्रमुख कार्यकारी निर्माता एवं प्रस्तोताका रूपमा कार्यरत थिए ।पाँच वर्षपछि न्युज २४ टेलिभिजनबाट बाहिरिएको लामिछानेले पुष्टि गरे ।
उक्त कार्यक्रम न्युन २४ बाट अब केही भाग प्रसारण हुने छ । ‘उहाँले पाँच महिनाअघि नै राजीनामा दिनुभएको थियो । स्वीकृतचाहिँ भएको छैन’, सिधा कुरा जनतासँग निर्माण टोलीका एक सदस्यले भने, ‘नयाँ योजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने समय आएकाले उहाँ (रवी लामिछाने) ले टिभी छाड्नुभएको छ ।
ती सदस्यका अनुसार सिधा कुरा जनतासँग अब दुईरतीन एपिसोड प्रसारण हुने छ । लामिछानेले सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमलाई अझ परिस्कृत, स’शक्त बनाएर पुनः दर्शकमाझ आउने बताएका छन । ‘म मिडियाबाटै अलग्गिन खोजेको होइन ।
नयाँ योजनामा काम गरिरहेको छु’, लामिछानेले भने, ‘अझ फराकिलो, परिमार्जित, प्रभावकारी कार्यक्रम लिएर छिट्टै आउने छु ।’कुन टिभी, कुन कार्यक्रम भन्नेबारे चाँडै जानकारी गराउने उनले बताए । नागरिक सरोकारका विषयमा खरो प्रस्तुतिका कारण जनमानसमा उनी निकै रुचाइएका छन् ।
(esidhakura.com बाट साभार)
दक्षिण एशियाली मुलुकमा भ्रष्टचारको अवस्था यस्तो छ
एक महानगर र पाँच उपमहानगरसहित १ सय २५ बढी ’गाउँका सिंहदरबार’ निमित्तकै भरमा
जिद्दी छोराछोरीलाई कसरी अनुशासित बनाउने ?